ကိုယ်ဝန်မရ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး » ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း » ကိုယ်ဝန်ရစေမည့်နည်းလမ်းများ
Update Date ဩဂုတ် 4, 2021 .3mins read
အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီးတဲ့ စုံတွဲတွေတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ ချစ်စဖွယ်ရင်နှစ်သည်းချာ သားသားမီးမီးလေးတွေ မွေးဖွားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ အချက်က အမြဲတမ်းဦးစားပေးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးပမ်းသမျှ အဖတ်မတင်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်မရ သေးတာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်က သားသားမီးမီးလေးတွေ လိုချင်ပါတယ်ဆိုမှ မရရင် ပိုပြီးလိုချင်။ လိုချင်လျက်နဲ့ မရဆိုရင် သို့လောသို့သောတွေနဲ့ စိတ်ညစ်ညူးစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာရတတ်တဲ့အထိပါပဲ။
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ မခက်ခဲနိုင်ဘူးလို့ ယျေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ခြွင်းချက်အခြေအနေတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အချက်တွေက အမျိုးသားတွေမှာရော အမျိုးသမီးတွေမှာပါ ရှိတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မရတိုင်း ကိုယ်မစွမ်းလို့ သူမစွမ်းလို့ဆိုတာမျိုး တစ်ထစ်ချတွေးထင်လို့တော့ မရပါဘူး။ တစ်ခြားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ကြိုးပမ်းတာလည်း ၆ လ ထက်မနည်းကြာမြင့်လာချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်ဝန်မရသေးဘူးဆိုရင် တစ်ချို့များက မြုံနေလို့ တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေလို့လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မတော်တဆကြုံရတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ လူတိုင်းက အကြောင်းမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရတာမျိုးမဖြစ်တတ်ပါဘူး။ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ မရတာသာ ပိုများတာကြောင့်ပါ။
လေ့လာချက်တွေအရ စုံတွဲ ၂၀% လောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရယူရာမှာ ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့။ ၁၅% လောက်ဟာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေလို့မရပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ချို့ကြောင့်လို့ဆိုရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ခက်ခဲနေတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်း ပြဿနာများ
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို အဓိက အနှောင်အယှက်ပေးနေတဲ့ ပြဿနာက သုက်ပိုးပါပဲ။ သုပ်ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် မျိုးပွားနိုင်ခြေ၊ ကိုယ်ဝန်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြေကျဆင်းရတာများပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ အခြေခံအကျဆုံး ပြဿနာတစ်ရပ်လို့ဆိုရမှာပါ။
အဖြစ်များတဲ့ သုက်ပိုးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကတော့
သုက်ကောင်အရေအတွက်နည်းပါးတာ – သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ကောင်အရေအတွက် နည်းပါးလွန်းတာ ဒါမှမဟုတ် သုက်ကောင်မပါဝင်တာက ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
Sperm Motility – သုက်ကောင်တွေ လိုအပ်သလောက် မရွှေ့လျားနိုင်တာကို Sperm Motility လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သုက်ပိုးတွေ လုံလောက်တဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ မရွေ့လျားနိုင်တာကြောင့် မမျိုးဥနဲ့ ထိနိုင်ခြေလျော့ကျပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေနည်းသွားတတ်ပါတယ်။
ပုံမန်မဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုက်ကောင်တွေရှိနေတာ – မိမိရဲ့သုက်ရည်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ သုက်ကောင်တွေဟာ မျိုးအောင်လောက်တဲ့ ပုံစံမျိုးမရှိပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်တည်နေတာမျိုးကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေနည်းသွားစေတတ်ပါတယ်။
သုက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့နေတာ – သုက်ရည်လုံလုံလောက်လောက် မထွက်ရှိနိုင်လောက်အောင်ကို သုက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ရယူနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို မဖန်တီးနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပြဿနာတွေကတော့ ယာယီ သုက်ရည်ထွက်နှုန်းနည်းပါးတာ၊ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ဝှေးစေ့တို့မှာ ဒါဏ်ရာရရှိနေတာ၊ သုက်ရည်အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကို မှီဝဲနေရတာ၊ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ် အလွန်အကျွံမှီဝဲသုံးစွဲတာ နဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်လာတာတွေပါ။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသားတွေဟာ အသက် ၃၀ ကျော်လာတာနဲ့ တစ်နှစ်ကို ၁% လောက် သုက်ရည်အရည်အသွေးကျဆင်းလာတတ်တာကလည်း ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်မရ အောင် နှောင့်ယှက်နေတဲ့ ပြဿနာများ
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ နည်းစေတဲ့ အဓိက ပြဿနာကတော့ သားအိမ်ကနေ မမျိုးဥကို အောင်အောင်မြင်မြင်မထုတ်လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ပြောရရင် သုက်ကောင်နဲ့ထိမိကာ ကိုယ်ဝန်ရစေမယ့် မမျိုးဥကို သားအိမ်ကနေ မထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအခြေအနေကို polycystic ovary syndrome လို့ ခေါ်ပါတယ်။
သားအိမ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ သားဥတွေဟာ သားအိမ်ပြွန်ကနေ ကောင်းစွာထွက်မလာနိုင်တာကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေနည်းပါးသွားတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ပြွန်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုလလို အခြေအနေမျိုးတွေ၊ တစ်သျှူးဆဲလ်တွေကြောင့် ယာယီအားဖြင့် ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး ဒီအချက်ကလည်း အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကို တားဆီးထားတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ နည်းပါးသွားစေတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သေစာ မှီဝဲခြင်းကြောင့်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားခြင်း သို့ အဝလွန်အဆင့်ရောက်နေခြင်းတွေကလည်း ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ခက်ခဲအောင် အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် cervical mucus ကလည်း မအင်္ဂါအတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ သုက်ပိုးတွေကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှေးကွေးအောင်လုပ်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း ကိုယ်ဝန်ရရှိရေးမှာ အတားအဆီးတစ်ရပ်ပါပဲ။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ကျော်လွန်လာရင် မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကျဆင်းလာတတ်တာပါ။ အသက် ၄၅ နှစ်အထက်မှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကတော့ အလွန်ကိုနည်းပါးလှပြီး ရှားပါးဖြစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
မေးရိုးတလျှောက်မှာ ပေါက်နေတဲ့ ဝက်ခြံတွေကို စိတ်ညစ်နေပြီလား။ ဘယ်လို သက်သာအောင်လုပ်ရမလဲ တွေးပူနေပြီလား။ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, ဝက်ခြံ စက်တင်ဘာ 3, 2019 .2mins read
ကလေးရနိုင်ခြေအကြောင်းကို အရင်မပြောခင် ကလေးရနိုင်ဖို့ လုံးဝကို အဓိက ကျတဲ့ မမျိုးဥ ...
ကိုယ်ဝန်ရစေမည့်နည်းလမ်းများ, ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး မေ 10, 2019 .2mins read
polycystic ovary syndrome သန္ဓေတားဆေး စိတ်ဖိစီးမှု ခန္ဓါကိုယ် ရာသီသွေး ကိုယ်ဝန် ရာသီစက်ဝန်း မအီမသာဖြစ်တာ လေဒီလေးတွေ ရာသီသွေးဆင်းတာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး, အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဇန်နဝါရီ 21, 2019 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 25, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 31, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 27, 2020 .2mins read
စိတ်ချရတယ်ဆိုပြီး မီးနီဖြတ်မလို့လား။ ခဏလေး နေပါဦး
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 23, 2020 . 1 min read